Ny CL215 vaovao tsy miasa tanteraka
fanontaniana Ny CL215 vaovao tsy miasa tanteraka
1 taona 4 volana lasa izay #1048 by Dragnhorn
Tiako ity fiaramanidina ity ary nahita izany tany Rikoooo. Mijery, feo, mandositra lehibe saingy tsy azoko ny lela, fitaovana hiasa. Ny tontonana fanaraha-maso hafa dia tsara. Nodinihako ny safidy Controller ary manana fitaovana napetraka ho G. Ity asa ity ho an'ny fiaramanidina rehetra afa-tsy ny CL215. Olona iray hafa no niaina izany, na manana fikafika?
1 taona 4 volana lasa izay #1049 by bobyor
Manana ny CL215 mihazakazaka aho P3Dv4.2 tsy misy olana. Tsy azonao antoka izay holazaina afa-tsy ny manala azy tanteraka, maka download kopia vaovao ary averina indray.
Tsara vintana, fiaramanidina gre4at tokony hidina.
1 taona 4 volana lasa izay #1050 by Dragnhorn
Misaotra Bob, tsara ny mahafantatra fa mahomby izy io. Tsy azoko antoka hoe nahoana ny paompy sy ny fitaovana no tsy miasa. Rehefa nafindrako voalohany dia nidina ny fitaovana. Nesorina saingy tsy afaka nanangana azy ireo. Raha mifindra amin'ny fiaramanidina hafa aho ary manangana ny fitaovana dia afaka miverina any amin'ny CL215 aho ary ny fitaovana koa dia raisina. Nefa, mazava ho azy ankehitriny, tsy afaka mampidina azy ireo aho. Nataoko ny fanesorana ary averiko indray fa averiko indray!
1 taona 4 volana lasa izay #1051 by bobyor
Avy amin'ny famakiana ireo sehatra fiadian-kevitra, dia nisy fanehoan-kevitra marobe momba ny rakitra tsy miasa avy amin'i rikoooo.
Navoaka tamin'ny tranokala hafa aho. Angamba raha mbola misy olana ianao, manandrama download hafa.
1 taona 4 volana lasa izay #1053 by rikoooo
Ny antontan-drakitra ao Rikoooo dia mitovy tanteraka amin'ny tranonkala hafa, ny hany tokana dia ny fananganana auto-installer ny doka automatique amin'ny ordinatera marina, izany no izy. Tsy mila download hafa any an-kafa.
Ny freeware dia tsy tonga lafatra ary ara-dalàna ny manana olana sasantsasany, na izany aza, ny ankamaroan'ny olana dia hazavaina ao amin'ny Readme.txt na boky izay tsy dia manahirana loatra ny ankamaroan'ny olona mamaky azy, ity no tena olana.